सैनिक तालिम होइन जिम्मेवार नागरिक बनाउने शिक्षा
गाउँखाने कथा - १९ (Nepali Gau Khane Katha)
नेपालमा हाल एउटा अर्को बहस सुरु भएको छ, १८ बर्ष् पुगेका सम्पूर्ण नागरिकले अनिबार्य सैनिक तालिमा लिनु पर्ने । सिद्दान्त त यो निती खराब होइन त्यस्तो तालिमले शहनसिलता , अनुशासन , आदर र सामुहिक भावना ( team sprit ) परिमार्जन गर्दछ । कोरिया , ईरान , इराक , इज्रायल लगायत केही मुलुक मा त्यस्तो निती लागु भएको छ । त्यो भन्दा पनि स्तरिय शिक्षा जापानमा दीइन्छ, जापानले लागु गरेको सिविक सेन्स एक्टले शैनिक तालिम नदिए पनि एक तालिम प्राप्त जवान झै जापानिजहरुमा अनुशासन , सामुहिक भावनाको बिकास भएको छ । सैनिक तालिमको उदेष्य लाई प्राप्त गर्न कम्तिमा ६ महिना ब्यारेक सिस्टममा रहनु अनिबार्य हुन्छ । आजको जमाना मा युबा पिढी लाई उनीहरुको इच्छा बीपरित जबर्जस्ती गर्न उचित हुँदैन । आम नागरिक लाई सभ्य , अनुशासित , जिम्मेवारी र दायित्व , एक अर्काको सम्मान , राष्ट्रियता प्रती सजग र शसक्त गराउनको लागि निम्न बुदा लाई समेट्ने गरि ''नागरिक आचरण कानुन '' बनाइ प्राथमिक स्कुलको पाठ्य पुस्तकमा समाबेश गराइ प्रशिक्षित गराउनु भने अनिबार्य भई सकेको छ ।
क - जिम्मेवारि - एक जिम्मेवार नागरिकको कर्मले नै घर , समाज र देश लाई प्रगती पथमा डोर्‍याउन सक्तछ । प्रत्यक नागरिकमा घर , समाज र देश प्रती उस्को जिम्मेवारि बोध हुनु पर्दछ । ब्यक्ती , परिवार समाज र देशको लागि प्रत्यक को कर्तब्य लाई महसुस गर्न सक्ने शिक्षा दिन सक्यौं भने आउदो पीढीले एक उन्नत समाज र राष्ट्र बनाउन सक्तछ । आज देशमा जती पनि बन्द , हडताल् , तोडफोड , हिसा , कानुन हात मा लिने काम भएका छन त्यो सबै जिम्मेवारि मानसिकता को अभाब मा भएका हुन।
ख - असल नागरिक - कुनै पनि देश को प्रगती को आधार प्रत्यक गौरबशाली नागरिक नै हुन । नागरिक हुनुको अर्थ आफ्नो देश प्रती प्रत्यकले उत्तरदायित्व बहन गर्नु पनि हो देशले के दियो भनी सोच्ने भन्दा मैले के दिन सक्तछु ? भनी सोचाइ राख्ने नागरिकको उत्पादन राष्ट्रले गर्न सक्नु पर्दछ । बिकासित मुलुकहरुमा नागरिक लाई इश्वरको नाममा '' देश जनता र कानुनको पूर्ण पालना गर्दै राष्ट्र हित बिपरित कुनै पनि काम गर्ने छैन भनी शपथ दिलाइन्छ । ताकी नागरिक हुनुको अर्थ राज्य सीत अधिकार माग्ने मात्र होइन राज्य प्रती उस्को उत्तरदायित्व पनि छ । प्रत्यक नागरिकले ब्यक्ती समाज र देश हित बिरुद्ध काम नगरे देश बिकसित हुन समय लाग्दैन । त्यसैले प्रत्यक लाई असल नागरिक बन्न प्रोत्साहित हुने शिक्षा दिनु पर्दछ ।
ग - निस्पक्षता - नागरिक मा हुनु पर्ने गुण मध्य निस्पक्षी भावना अनिबार्य हुन्छ । जुन सुकै क्षेत्रमा पनि पद , जात भात , वा प्रभाब को आधार मा बिभेद नगर्ने मानसिकता को बिकास गर्नु जरुरी छ । ब्यक्ती को योग्यता , र क्षमता ले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ र पाएको छ भन्ने विश्वाश नागरिक हुनु पर्दछ । यस्ले समाज को बिबाद र द्वन्द लाई समाप्त गर्न सहयोग पुग्दछ । निस्पक्ष व्यबहार ले योग्य नागरिक अबसर र हक बाट बन्चित हुने छैन र उस्ले पनि त्यस्तै व्यबहार दिने छ र नागरिक को राज्य प्रती विश्वाश र भरोषा बढ्न जान्छ । निस्पक्ष भावना को बिकास हुने उच्च शिक्षा को जरुरी हुन्छ ।
घ - आदर सम्मान - मानब मानब बिचमा कुनै पनि कारणको बिभेद हुनु हुन्न र सबले सबलाई आदर र सम्मान गर्नु पर्दछ भन्ने भावना बिकसित हुने शिक्षा को जरुरी छ । यो प्रसँगमा फेरी जापान को उधाहरण; कुनै कम्पनी वा बिभागको प्रमुख होस कि निम्न स्तरको कर्मचारी दुबैमा एकले अर्का लाई भेट्दा प्रतिस्पर्धा जस्तो हुन्छ, कि कस्ले पहिले नमस्कार गर्ने , त्यती मात्र होइन त्यहा कुक्कुर , बिराला र पहाड (फुजी ) लाई समेत आदर पूर्वक जि ( शान ) जोडेर सम्बोधन गर्दछन । बाबु आमाले सन्तान लाई गर्ने आदरबाट सुरु हुने यो किस्सा समाज र राष्ट्र को गहना बनेर रहेको हुन्छ । एकले अर्का लाई गर्ने सम्मानले नै एक अर्कामा बिस्वास र सामिप्य बढ्दछ । प्रत्यकले प्रत्यकको अस्तित्व स्विकार्नु नै सम्मान र आदर गर्नु हो यस्ले प्रेम भाब बढ्दछ , र समाज का साना तिना समस्या बिबाद स्वत: हट्न जाने मात्र होइन ठुला समस्याको निकास पनि सजिलै निस्कन्छ । अरु लाई आदर सम्मान गर्ने मानसिकता ले समाज र देश लाई नै सुखी बनाउन सक्तछ । हाम्रो देशमा खड्किएको अर्को समस्या यो पनि हो कि हामी अरुको सम्मान र आदर गर्न कन्जुस्याइ गर्दछौ ।
५ - सकारात्मक सोच - सभ्य ब्यक्ती र देशको लागि प्रत्यकमा सकारात्मक सोच हुनु जरुरी छ । सकारात्मक सोचले ब्यक्तीमा भएको आशंका , अबिश्वास , हतोत्साहिपन , र आडम्बर लाई निस्तेज गरि भरोसा , बिस्वास , प्रोत्साहन र नम्रता लाई बढवा दिन्छ अनी आशंका र अविविश्वासमा चालिने कदम बाट हुने दु:खद परिणाम् बाट जोगाइ समयित र सन्तुलित व्यबहार गर्न उत्पेरित गर्दछ । समाजको प्रत्यक ब्यक्तीमा अरुको लागि राम्रो गरि दिने र खराब गर्न टाढै बस्ने सोच भएमा अरुले अनाहकमा दु:ख पाउने छैनन । दुस्ट्याइ र छल कपट्याइलाई हटाउन बच्चा लाई सुरु देखी नै समाज सेवा , मानविय सेवा र सहयोगका बारेमा शिक्षा दिनु पर्दछ । ''मेरो कारणले अरु लाई अनाहकमा दु:ख नहोस ''भन्ने भावना को बिकास गर्ने शिक्षा जरुरी छ ।
६ - सहयोगि - समाज र देशको लागि प्रत्यक नागरिकले अर्कामा सहयोगात्मक भावना र व्यबहार देखाउने प्रबृतिको बिकास हुनु पर्दछ । सहयोगले सबै अनुग्रहित हुन्छन एक अर्कामा मैत्री भाब बढ्दछ सहयोगको बदला सहयोग पाइ सबै को भलो हुन्छ, एक अर्कामा द्वेष भाब रहन्दैन । सहयोगि भावना बिकास गर्न पनि बच्चै देखी घर , शिक्षक , नातागोता , साथी बिच दैनिक कार्यमा मौका पाउने बितिक्कै सहयोगको लागि अगाडि बढने भावना मनमा बिकास गर्न तदनुरुपको शिक्षा पाठ्य पुस्तकमा राख्नु पर्दछ ।
बिगत केही समय देखी नेपाली समाजमा उदन्ड , आमानविय र मानब सभ्यता माथि नै धब्बा लाग्ने गरि हींसक व्यबहार बढ्दै गएको छ । मानिस लाई मलमुत्र खुवाउनु , कुटेर , जलाएर मार्नु , घर र बस्ती बाट निकाला गर्नु , घटनाको अनुसन्धान मा पुग्नु भन्दा पहिले नै भिडले न्याय खोज्नु , निर्दोषले सास्ती पाउनु दैनिकी भै सकेको छ । यो प्रबृति बाट मुक्त हुन नागरिक समाज , राजनैतिक दल , पत्रकार , शिक्षक र ब्यक्ती ले आ आफ्नो जिम्मेवारीलाई महशुस गरी यस्तो प्रबिर्ती बन्द गर्ने प्रती बद्धता नगर्ने हो भने हामी नेपालीले बिश्व सामु लज्जित हुनु पर्ने छ ।
लौ अब नेपालमा जादा उतै समात्ने भए र बन्दुक पड्काउन सिकाउने भए।
हैन बिप्लव जी, किन डराउनु भको ? बन्दूक चलाऊन सिकेको त अमेरिका मा झन काम लाग्छ नि अतिरिक्त रोजगारी को लागि ;)... सेखर जी तपाईं ले भने जस्ताइ जापानिज मोडल को बन्दूक र ब्यरेक बिनाकै स्काउट को जस्तो तालिम दिनु चाँही राम्रै होला
यी जिम्मेवार नागरिकहरु बाट पछि देशलाई नै खतरा हुने सम्भावना कतिको छ त्यो त मैले भन्नु नपर्ला ///// तपाइले माथि उल्लेख गर्नु भएको प्राय देशलाई सारा विश्वले आतंकवाद देश भनेर चिन्छन,,,,अब भन्नुहोस् त हामी के आशा राख्नु ???????????
लेख अत्यन्तै गहन छ ।
अहिले को परिस्थिती मा " जिम्मेबार नागरिक बनाउने शिक्षा " साच्चै नै अपरिहार्य भएको छ मुलुकको लागि ।